योगेशको प्रश्न : केपी ओली होसमा र सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ? - Dainik Online Dainik Online
योगेशको प्रश्न : केपी ओली होसमा र सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति : २० पुस २०७७, सोमबार ३ : २१
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओली अशिष्टता र तर्कहीन गालीगलौजमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड–माधव नेपाललगायतका नेतामाथि तल्लोस्तरमा टिप्पणी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
? सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ?